नेपाल आज | चुनाव जित्न ट्रम्पले चालेको चाईना कार्डः विपक्षी उम्मेदवारलाई समाजवादी सावित गर्ने दाउपेच
चुनाव जित्न ट्रम्पले चालेको चाईना कार्डः विपक्षी उम्मेदवारलाई समाजवादी सावित गर्ने दाउपेच
बुधबार, २४ भदौ २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
अमेरिकी चुनावमा वादका कुरा प्रायः सुन्य हुन्छन्। त्यहाँ प्रतिस्पर्धिको व्यक्तित्व, पृष्ठभूमी, नजिर र कार्यसम्पादनका बारेमा चर्चा हुने गर्दछ । जनताको दैनिक जीबनलाई असर पार्ने कर, बीमा, स्वास्थ्य सेवा, विदेश नीति आदि वहसका प्रथामिक्तामा पर्दछन् ।
अमेरिकी राजनीतिमा ट्रम्पको उदयसँगै केही नयाँ मुद्धा केन्द्रीय सवाल बनेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा उनले सीमामा पर्खाल, आप्रवासनमा नियमन, बैदेशिक सुरक्षामा खर्च कटौतीजस्ता नारालाई जबरजस्त अघि सारे । जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेवियाजस्ता धनी देशको सुरक्षामा अमेरिकी जनताले तिरेको कर किन खर्च गर्ने ? सुरक्षामा अमेरिकी फौज खटिएबापतको खर्च सम्बन्धित देशले व्योहोर्नुपर्नेजस्ता अपरम्परागत नाराले ट्रम्पको ह्वाइटहाउस प्रवेशलाई सम्भब बनाइदियो ।
ट्रम्पको अप्रत्याशित राजनीतिक आरोहणले विश्वजगतमा आशा कम आशंका बढी छायो । गैरराजनीतिक पृष्ठभूमी, विवादस्पद ब्यवसायीक छबी, अस्वभाविक अभिव्यक्ति र नयाँ नारासहित अमेरिकाको कमाण्ड सम्हालेका ट्रम्पले जे पनि गर्न सक्ने र जस्तो सुकै अवस्था आउन सक्ने चर्चा विश्वभर चल्यो । यद्यपी कार्यकालको आखिरीसम्म पनि ट्रम्पले विश्व तरंगित हुने एक्सन खाशै केही गरेनन् ।
केही मुसलमान बहुल देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने उनको घोषणा लामो समय टिकेन । उत्तर कोरियालाई उडाइदिने भनेर सयुँक्तराष्ट्रमा भाषण गरेका ट्रम्पले अप्रत्याशितरुपमा समकक्षी किम जोङसँग उत्तर कोरियाकै माटोमा हात मिलाए । भलै वार्ताले ठोस नतिजा दिइसकेको छैन, तर ट्रम्पले कोरियालीद्विपको सवालमा फरक कदम चालेका हुन । ट्रम्पले एक्सन लिएको अर्को वैदेशिक सवाल हो–भेनेजुएला । भेनेजुएलाका विपक्षी नेता जान गुआइडोले सडकबाटै आफुलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे । ट्रम्पले गुआइडो आधिकारीक राष्ट्रपति भन्दै अमेरिकाले सत्तासिन मुडरोलाई नचिन्ने घोषणा गरे । ट्रम्पले नचिन्ने घोषणा गरेको २ बर्ष हुन लागिसक्यो, मुडरो अझैँ राष्ट्रपति छन् । अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट दिक्षित गुआइडोलाई सत्तारोहण गराउन नपाउँदै ट्रम्पको वर्तमान कार्यकाल सकिने सम्भावना छ ।
ट्रम्पको कार्यकालमा भएको सबैभन्दा ठूलो घटना इरानका सेना प्रमुख सुलेमानीको इरानमा भएको हत्या हो । अमेरिकाद्वारा सुलेमानीको हत्यापछि तेस्रो विश्वयुद्धको चर्चा चलेपनि खाश केही भएन ।
के ट्रम्प चुनाव जित्छन् ?
ट्रम्पसँग विश्वराजनीतिक सवालमा आफूले यो गरेँ भनेर देखाउने खाश मुद्धा थिएनन् । तर, उनका लागि घरेलु मुद्धा काफी थिए । अमेरिकी अर्थतन्त्र ऐतिहासिक रुपमा उकासिएको र रोजगारी बढेको इन्डेस्कका कारण ट्रम्प उत्साहित थिए । उनले हरेकजसो अभिव्यक्तिमा अर्थतन्त्रका इन्डेक्स उल्लेख गर्दै आएका थिए ।
यही बीचमा कोरोना आइदियो । अमेरिकी अर्थतन्त्र पनि खस्कियो । बेरोजगारी अभूतपूर्व रुपमा बढ्यो । ट्रम्पले कोरोना एकदिन त्यसै हराउने छ भनेर घोषणा गरेको केही हप्तामै कोरानाले अमेरिकालाई हायलकायल पार्यो । विश्वलाई सघाउन अघि सर्ने ठानिएको अमेरिका आफैँ मास्क, स्यानिट्याइजर जस्ता आधारभूत कुराको अभावमा हप्तौँ पिल्सिरह्यो । कोरोना कहरका बेला अमेरिकाले विश्वकमाण्ड गर्ने मौका चुकायो । समयमा कोरोनासँग जुध्न पर्याप्त तयारी नगरेको र देशको सम्पुर्ण ब्यवस्था डामाडोल पारेको आरोप ट्रम्पमाथि विपक्षीले लगाइ रहेका छन् ।
आफुमाथि लागेको असफलताको आरोपलाई ट्रम्पले प्रतिकार गर्दै आएका छन् । आफनो असफलता ढाकछोप गर्न उनले ‘चाईना कार्ड’ प्रयोग गरिरहेका छन् । चीनले विश्वभर भाइरस पठाएको उनको दाबी छ । चीनले यसको हिसाव चुक्ता गर्नुपर्ने र त्यो आफूले मात्र सक्ने उनको दाबी छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रपति चुनावसम्म ट्रम्पले चीनका सवालमा जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। किनकी उनले राष्ट्रियताको नारा अघि सारेका छन् र चीन अमेरिकाका लागि खतरा रहेको स्थापित गर्न चाहिरहेका छन् । उनको यो शैली नयाँ होइन । अघिल्लो कार्यकालमा उनको एउटा मुख्य एजेण्डा मुसलमानसँग सम्बन्धित थियो ।
अर्कोतर्फ विपक्षी डेमोक्रयाटका राष्ट्रपतीका उम्मेदवार जो बाइडेनलाई समाजवादी सावित गर्न ट्रम्पको प्रयास जारी छ। नेपालमा समाजवाद औधी रुचाइएको राजनीतिक मुद्दा भएपनि अमेरिकाको मूलधारे राजनीतिले समाजवादलाई वाहियात र देशका लागि खतरापूर्ण ठान्दछ ।
ट्रम्पले जो बाइडेनलाई लुते (स्लिपी) को संज्ञा दिने गरेका छन् । चीनले बाइडनको जित चाहेको प्रचार ट्रम्प निकट संचारमाध्यमबाट हुँदै आएको छ ।
ट्रम्प आफूलाई लागेको कुरा अरुले सजिलै बुझ्नेगरी व्यक्त गर्दछन् । विपक्षीलाई भित्तामा पु¥याउने गरी बोल्ने र हतोत्साहित पार्ने उनको शैली छ । उनले पहिलो निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धी हिलारी क्लिन्टनलाई भ्रष्ट महिलाको रुपमा चित्रण गरिरहे । हिलारीकै सामू आफू निर्वाचित भएपछि हिलारी जेल जाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिए । त्यसै गरी अहिले बाइडेनलाई लुतेको संज्ञा दिइर उनी प्रतिपर्धीलाई कमजोर वनाउने शैली अपनाईरहेको स्पष्ट छ।
उमेर एकाध बर्षको फरक भएपनि बाइडेन ट्रम्पभन्दा अलि पाको देखिन्छन् । दशकौँ राजनीतिमा बिताएका बाइडेनको शैली भद्र छ, उनी आक्रामक छैनन् । बोलीचाली पनि औपचारिक र सहज प्रकृतिको छ ।
मासलाई आकर्षित गर्न जस्तो पनि वोली दिने शैली उनको छैन । बाइडेन अमेरिकाका लागि नयाँ नाम होइन । र, चमत्कारिक नाम पनि होइन । तर उनी राम्रो मानिस हुन भन्नेमा दुईमत छैन । तर, चुनावी माहौलमा बाइडेनको यहि शैली र स्वभाव प्रत्युपादक पनि हुनसक्छ ।
अमेरिकामा कालाजाती र आप्रवासीको मत कता जान्छ भन्ने कुराले पनि चुनावमा अर्थ राख्नेछ । काला जाति र अस्वेत आप्रवासीहरुले उत्साहप्रद मतदान विरलै गरेका छन् । बाराक ओबामाको पालामा काला जातीले उल्लेख्य रुपमा मतदान गरेका थिए । अहिले अमेरिकामा ‘ब्ल्याक लाइफ म्यार्टस’ अर्थात कालाको जीबनको पनि अर्थ छ भन्ने आन्दोलन जारी छ । यदि यो आन्दोलनको रापका कारण काला जातिले उल्लेख्य मात्रामा मतदान गरेमा निर्वाचनमा ठुलो प्रभाव पार्नेछ । यहि कारण हो–ब्ल्याक लाइफ म्यार्टसका नाममा भएको आन्दोलन प्रति ट्रम्प रुखो सुनिने गरेका छन् ।
डेमोक्रयाट पार्टीका तर्फबाट उपराष्ट्रपति उम्मेदवार कमला ह्यारिशका कारण काला जाति र अस्वेत आप्रवासी मतदानका लागि उत्साहित हुने आँकलन गरिएको छ । जमैकन बुबा र भारतीय आमाकी छोरी ह्यारिशको उम्मेदवारी कालाजाती र अस्वेत आप्रवासीलाई मतदानमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा डेमोक्रयाटहरुको छ ।
विश्वभर पैसाले चुनावमा प्रभाव पार्दछ । पैसाकै देश भनेर चिनिने अमेरिका यसबाट अछुतो हुने कुरा भएन । यसपाली कोभिडका कारण विज्ञापन प्रचार प्रशारको मुख्य माध्यम हुनेछ । अहिले ट्रम्प र बाइडेन सहयोग जुटाउने अभियानमा लागिरहेका छन् । सहयोगदाताले घरमै बसीबसी इन्टरनेटमार्फत उनीहरुको अभियानलाई सहयोग गर्न सक्दछन् ।
कोरोनाका नाममा करदातालाई दिइएको राहतलाई पनि चुनावी बर्षको प्रभावका रुपमा हेरिएको छ । संघीय सरकारले करदाताको खातामा एक लट पैसा पठायोे । बेरोजगार भत्ता सहज बनाइयो । साना उद्यमीका लागि अनुदान र सस्तो ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराइयो । अझ दोस्रो लटको सहयोगका लागि प्रयास जारी छ । सहगोग आफूहरुका कारण आएको देखाउन दुबै पक्ष लागि परेको छन् । यदि यो बर्ष चुनाव हुदैनथ्यो भने यसरी पैसा बाँड्न सर्बसम्मति हुने थियो त ? प्रश्न पेचिलो छ ।
सामान्यतया अमेरिकामा बहालवाला राष्ट्रपतिले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि चुनाव जित्ने गर्दछन् । कोरोनाको कहर नभइदिएको भए ट्रम्पका लागि बाटो तुलनात्मक रुपमा सहज हुने थियो । अहिले ट्रम्पका लागि चुनौति थपिएको छ । तर, उनी पुनःनिर्वाचित हुने सम्भावना सकिइसकेको छैन । किनकी अमेरिकनहरुको एउटा हिस्साका लागि ट्रम्प आदर्श नायक हुन् । उनीहरुको मनभित्रको अभिव्यक्ति ट्रम्पले जस्ताको तस्तै बाहिर व्यक्त गर्ने गर्दछन् । ट्रम्पका विवादस्पद अभिव्यक्तिले उनको साख दुनियाँको नजरमा खस्केको होला, तर खाश समर्थकका नजरमा ‘क्या दियो’ भन्ने नै छ ।
न्यायिक सेनापतिले देशको मुख हेर्ने कि बालुवाटारको पर्खाल र लैनचौर ?